Myanmar All Sim Registration! 2.6 APK Download - Android Communication Apps
APK Downloader Apps Communication Myanmar All Sim Registration! 2.6
Myanmar All Sim Registration! 2.6 APK
#Myanmar Android Apps
You can register all Myanmar sim Card, MPT, Telenor, Ooredoo.
Please Invite your friends For Register Their SIM Cards with ThisApp!
(Myanmar Zawgyi Font)
မိမိတို့ရဲ့ ဆင်းမ်ကဒ်များကိုအွန်လိုင်းကနေအလွယ်တကူမှတ်ပုံတင်လို့ရနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Telenor, MPT, Ooredooဆင်းမ်ကဒ်များအားလုံးမှတ်ပုံတင်လို့နိုင်ပါတယ်။
အဆင်မပြေတာတွေ ဒါမှမဟုတ် မိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဒီ App ကိုအသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ဆင်းမ်ကဒ်တွေကို
မှတ်ပုံတင်နိုင်ကြောင်း ပြောဖို့မမေ့ကြနဲ့နော် :)
(Myanmar Unicode Font)
မိမိတို့ရဲ့ ဆငျးမျကဒျမြားကိုအှနျလိုငျးကနအေလှယျတကူမှတျပုံတငျလို့ရနိုငျမယျ့ App ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံအတှငျးရှိ Telenor, MPT, Ooredooဆငျးမျကဒျမြားအားလုံးမှတျပုံတငျလို့နိုငျပါတယျ။
အဆငျမပွတောတှေ ဒါမှမဟုတျ မိမိတို့ရဲ့ထငျမွငျခကျြမြားကိုပေးပို့နိုငျပါတယျ။
ဒီ App ကိုအသုံးပွုပွီး အှနျလိုငျးကနတေဆငျ့ ဆငျးမျကဒျတှကေို
မှတျပုံတငျနိုငျကွောငျး ပွောဖို့မမကွေ့နဲ့နျော :)
App Information Myanmar All Sim Registration!
Myanmar All Sim Registration!
Par Lyan Road, Tachileik, 160301, Myanmar(Burma)
Myanmar All Sim Registration! Version History
Select Myanmar All Sim Registration! Version :
Myanmar All Sim Registration! 2.5 APK File
File Sha1: 021a8ae832f9a88e6d00392f177d49359f111942
APK Signature: 5ec8e47609e3d65723321134d82274c2d581f6f1
#Myanmar Android Apps Show More...
Myanmar Heart Font 1.1 APK
"Myanmar Heart" Font is Non StandardMyanmarUnicode Font.This is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access!supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me.
Myanmar All Sim Register App!Registration you sim Free with this app.You can register all Myanmar sim Card, MPT, Telenor, Ooredoo.Very simple useful App.Please Invite your friends For Register Their SIM Cards with ThisApp!Thanks For Using My App.////////////////////////////////(Myanmar Zawgyi Font)မိမိတို့ရဲ့ ဆင်းမ်ကဒ်များကိုအွန်လိုင်းကနေအလွယ်တကူမှတ်ပုံတင်လို့ရနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Telenor, MPT, Ooredooဆင်းမ်ကဒ်များအားလုံးမှတ်ပုံတင်လို့နိုင်ပါတယ်။အဆင်မပြေတာတွေ ဒါမှမဟုတ် မိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်သုံးလို့အဆင်ပြေလျှင်မိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီ App ကိုအသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ဆင်းမ်ကဒ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်ကြောင်း ပြောဖို့မမေ့ကြနဲ့နော် :)////////////////////////////////(Myanmar Unicode Font)မိမိတို့ရဲ့ ဆငျးမျကဒျမြားကိုအှနျလိုငျးကနအေလှယျတကူမှတျပုံတငျလို့ရနိုငျမယျ့ App ဖွဈပါတယျ။မွနျမာနိုငျငံအတှငျးရှိ Telenor, MPT, Ooredooဆငျးမျကဒျမြားအားလုံးမှတျပုံတငျလို့နိုငျပါတယျ။အဆငျမပွတောတှေ ဒါမှမဟုတျ မိမိတို့ရဲ့ထငျမွငျခကျြမြားကိုပေးပို့နိုငျပါတယျ။ကိုယျတိုငျသုံးလို့အဆငျပွလြှေငျမိမိတို့ရဲ့မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေိုလညျးဒီ App ကိုအသုံးပွုပွီး အှနျလိုငျးကနတေဆငျ့ ဆငျးမျကဒျတှကေိုမှတျပုံတငျနိုငျကွောငျး ပွောဖို့မမကွေ့နဲ့နျော :)
Basic Korean(Myanmar) 1.0 APK
အခြေခံ ကိုးရီးယား စကားပြော Appလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုးရီးယား စကားပြောကို အခုမှ စပြီးလေ့လာသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ App ပိုပြီးကောင်းလာဖို့ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကိုကြိုဆိုပါတယ်။
Yangon Bus (2017) 1.1 APK
(Zawgyi Version)ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာစတင်ပြေးဆွဲမယ့် YBS (Yangon BusService)အတွက်Yangon Bus ဆိုတဲ့ Android Application လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်ကားနံပါတ်ကဘယ်နေရာတွေကိုပြေးဆွဲမယ်၊ ဘယ်နေရာတွေဆိုရင်ဘယ်ကားတွေရောက်လဲဆိုတာကို အသေးစိတ်ကြည့်ရူ့နိုင်ပါတယ်။Map ပါဝင်တဲ့အတွက် ပိုမိုအသေးစိတ်သိရှိနိုင်တာပေါ့ :Pဘတ်စ်ကားဘယ်လိုစီးမလဲ ဆိုတာတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ဒီ Version မှာတော့ Offline ပါအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။အားလုံးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ Appလေးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။များများဝိုင်း Share ပေးဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် :Dwww.YangonBus.com ကနေယူသုံးထားတာပါ။DisclaimerIt's Not OFFICIAL application from Yangon Bus Service.Content CreditYangon Bus Service(www.YangonBus.com)===(Unicode Version)ဇနျနဝါရီလ ၁၆ ရကျနမှေ့ာစတငျပွေးဆှဲမယျ့ YBS (Yangon BusService)အတှကျYangon Bus ဆိုတဲ့ Android Application လေးလုပျပေးလိုကျပါတယျ။ဘယျကားနံပါတျကဘယျနရောတှကေိုပွေးဆှဲမယျ၊ ဘယျနရောတှဆေိုရငျဘယျကားတှရေောကျလဲဆိုတာကို အသေးစိတျကွညျ့ရူ့နိုငျပါတယျ။Map ပါဝငျတဲ့အတှကျ ပိုမိုအသေးစိတျသိရှိနိုငျတာပေါ့ :Pဘတျဈကားဘယျလိုစီးမလဲ ဆိုတာတှကေိုလညျးထညျ့သှငျးပေးထားပါသေးတယျ။ဒီ Version မှာတော့ Offline ပါအသုံးပွုနိုငျပါပွီ။အားလုံးအတှကျအသုံးဝငျတဲ့ Appလေးတဈခုဖွဈလိမျ့မယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။မြားမြားဝိုငျး Share ပေးဖို့အကွံပွုလိုပါတယျ :Dwww.YangonBus.com ကနယေူသုံးထားတာပါ။DisclaimerIt's Not OFFICIAL application from Yangon Bus Service.Content CreditYangon Bus Service(www.YangonBus.com)
Mi Font Maker(FontToMtz) 1.2 APK
You can change easily any font you like intoMIUI font (.mtz)Features========You can set custom...Font Name!Author Name!Designer Name!Version!MIUI Version!Description!Preview Image!You can change outsite font in MIUI 8 Without rooting and Designeraccount :)Note: You can convert TrueType Font(.ttf) to .MTZ only!!!( Other font extension not working, eg: otf,woff,ofm,eot)
Myanmar APNs 1.1 APK
Myanmar APNs is an Android app whichcontainsvarious apn settings fordifferent operators and frequencies in Myanmar.
4Coc Myanmar Font and Language 1.6 APK
COC မှာမြန်မာစာရေးချင်ဖတ်ချင်ပါသလား? ၊COC ကိုမြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုချင်ပါသလား?ဒါတွေအားလုံးကို#COC_Myanmar_Toolတစ်ခုတည်းနဲ့တင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။Root ဖောက်ထားတဲ့မည်သည့်Androidဖုန်းမဆိုအထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို#COC_Myanmar_Tool ကထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဖုန်းက Root ဖောက်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။Play Store ကနေအလွယ်တကူဒေါင်းယူရရှိနိုင်ပါတယ်။သို့မဟုတ်မိမိတို့ဖုန်းထဲက App Store တခုခုကနေလည်း 4Coc MyanmarFont& Language လို့ရှာပြီးဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။COC မှာမြန်မာစာရေးချင်ဖတ်ချင်သူများ၊မြန်မာဘာသာဖြင့်အသုံးပြုချင်သူများအတွက်ပါ။မြန်မာစာကို ဇော်ဂျီဖောင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ဇော်ဂျီထည့်သွင်းနိုင်သလို ယူနီကုဒ်အသုံးပြုနေသူများအတွက်လည်းCOC မှာမြန်မာယူနီကုဒ်ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ ဖောင့်အလိုက်ရွေးချယ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။App အတွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ ဖောင့်၊ icon ရေးတဲ့သူများCOC ကိုမြန်မာဘာသာပြန်ပေးထားသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Credit လည်းပေးပါတယ်။App နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာများအကြံပြုစာများ ရှိခဲ့လျှင် https://www.fb.com/MmFreeAndroidAppsမှာအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။(Unicode Version)COC မှာမွနျမာစာရေးခငျြဖတျခငျြပါသလား? ၊COC ကိုမွနျမာဘာသာဖွငျ့ အသုံးပွုခငျြပါသလား?ဒါတှအေားလုံးကို#COC_Myanmar_Toolတဈခုတညျးနဲ့တငျလုပျဆောငျနိုငျပါပွီ။Root ဖောကျထားတဲ့မညျသညျ့Androidဖုနျးမဆိုအထကျပါလုပျဆောငျခကျြတှကေို#COC_Myanmar_Tool ကထညျ့သှငျးပေးနိုငျပါတယျ။ဖုနျးက Root ဖောကျထားဖို့တော့လိုအပျပါတယျ။Play Store ကနအေလှယျတကူဒေါငျးယူရရှိနိုငျပါတယျ။သို့မဟုတျမိမိတို့ဖုနျးထဲက App Store တခုခုကနလေညျး 4Coc MyanmarFont& Language လို့ရှာပွီးဒေါငျးနိုငျပါတယျ။COC မှာမွနျမာစာရေးခငျြဖတျခငျြသူမြား၊မွနျမာဘာသာဖွငျ့အသုံးပွုခငျြသူမြားအတှကျပါ။မွနျမာစာကို ဇျောဂြီဖောငျ့အသုံးပွုသူမြားအတှကျဇျောဂြီထညျ့သှငျးနိုငျသလို ယူနီကုဒျအသုံးပွုနသေူမြားအတှကျလညျးCOC မှာမွနျမာယူနီကုဒျထညျ့သှငျးလို့ရပါတယျ။မိမိတို့အသုံးပွုတဲ့ ဖောငျ့အလိုကျရှေးခယျြထညျ့သှငျးနိုငျပါတယျ။App အတှငျးအသုံးပွုထားတဲ့ ဖောငျ့၊ icon ရေးတဲ့သူမြားCOC ကိုမွနျမာဘာသာပွနျပေးထားသူမြားအားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ။Credit လညျးပေးပါတယျ။App နဲ့ပတျသကျပွီးအဆငျမပွတောမြားအကွံပွုစာမြား ရှိခဲ့လြှငျ https://www.fb.com/MmFreeAndroidAppsမှာအကွောငျးကွားနိုငျပါတယျ။
Myanmar All Sim Card Register 1.0 APK
Myanmar All Sim Register App!This App is for register SIM Online. You have to register withyourMyanmar ID or Driving Licence.Registration you sim Free with this app.You can register all Myanmar sim Card, MPT, Telenor,Ooredoo,MecTel.
MyTelenor Bulgaria 2.0.1 APK
Telenor Bulgaria offers you the MyTelenor mobile application. Withit you can manage your telco number comfortably and on the go: •keep track on your current bill or credit • track your usage andchoose which one to be on focus on your home screen • checkprevious bills for your number • you can view and download detailedusage asapdf • pay your bill online with your credit or debitcard • quickly and safely top-up the credit foraprepaid numbervia voucher, via credit/debit card, or via your monthly bill • viewthe add-ons with mobile internet included, which are available foryour plan • manage services • find the nearest Telenor store •receive notifications for the latest offers and news in your Inbox- in Profile menu • inform yourself for the current offers fromTelenor The application is available for all mobile customers ofTelenor Bulgaria, using either postpaid, prepaid or business rateplan. You can use the app via mobile or WiFi network. MyTelenorsupports two language versions - Bulgarian and English.
Pakistan Sim Information 2.43 APK